Myanmar Deitta | Rakhine Stories
A Journey through the forest and villages of Southern Rakhine
22nd - 29th June | 10am - 5pm (closed Mondays)
“Rakhine stories” is bothajourney andaphoto-project that led Italian photographer Chiara Luxardo deep into the tropical forests of Southern Rakhine to visit Oikos project sites and witness the unique relationship between the local traditional lifestyle and the surrounding nature.
The exhibition aims at exploring and disclosing different “Rakhine stories”, where the beauty and the silence of the forest is revealed along with the unexpected appearance of its wild inhabitants, and the peaceful days in the many scattered villages are portrayed through the eyes and habits of locals.
“Rakhine Stories” သည် အီတာလျံဓာတ်ပုံပညာရှင် Chiara Luxardo ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ အပူပိုင်းသစ်တောများနှင့် IstitutoOikos ၏ စီမံကိန်းနေရာများသို့သွားရောက်ကာဒေသခံတို့၏ ရိုးရာလူနေမှုဘဝနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်အကြားတမူထူးခြားသည့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို လက်တွေ့လေ့လာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် ခရီးနှင့် ဓာတ်ပုံပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဓာတ်ပုံပြပွဲသည် အမျိုးမျိုးသော “Rakhine Stories” များကိုစူးစမ်းရှာဖွေရန်နှင့် ဖွင့်လှစ်တင်ပြရန် ရည်ရွယ်သည်။ တိတ်ဆိတ်လှပသည့် တောနက်များအတွင်းနေထိုင်ကြသည့် ရှားပါးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တို့၏ ပုံရိပ်များ နှင့် ကျေးရွာများရှိဒေသခံတို့၏ အေးချမ်းသာယာသည့်နေ့ရက်များဖြတ်သန်းနေကြပုံကို ရိုက်ယူဖော်ပြထားသည်။
Image © Chiara Luxardo